1. Waxyaabaha ku saabsan noocyada dareerayaasha Isticmaalka dareeraha si aad u isticmaasho hawo cadaadis leh, isticmaalka dareerayaasha kale ee munaasabadda waa inay shirkadda xaqiijiso. 2. Xaaladda biyaha isku halleeya Hawada la isku cadaadiyay ee leh biyo isku dhafan ayaa sabab u noqon doonta cillad bixinta qaybaha hawo-mareenka. Shaandhada kahor, a ...
1. Shuruudaha tayada hawada ee isticmaalka silsiladda: hawo nadiif ah oo qallalan oo cufan waa in la isticmaalaa. Hawada waa inaysan ku jirin saliid dabiici ah oo dabiici ah, milix, gaaska wax dila, iwm, si looga hortago silsilad, fal xun xun. Ka hor inta aan la rakibin, tuubada isku xidhka waa in si buuxda loo afuufaa oo la dhaqaa ...
Qingdao Silinde Qalabka Warshadaha Co., Ltd.
Qingdao Silinde Warshadaha Qalabka Co., Ltd. waxay u heellan tahay cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta mashruuca qalabaynta warshadaha YSC ee sanadihii la soo dhaafay. Iyada oo halganno joogto ah ay shirkadeennu waddo sannado, alaabooyinka YSC ayaa laga iibiyay adduunka oo idil. Iyadoo ...